मलेसियाबिरुद्धको दोस्रो खेलमा नेपालको रोमाञ्चक जित ! सिरिज पनि नेपालको कब्जामा – onlinekhelkhabar.com
मलेसियाबिरुद्धको दोस्रो खेलमा नेपालको रोमाञ्चक जित ! सिरिज पनि नेपालको कब्जामा
अनलाइन खेल खबर संवाददाता	Posted on असार २९ २०७६, आईतवार
असार २९ , अनलाईन खेलखबर || नेपाल र मलेसियाबिच भएको अन्तर्राष्ट्रिय टि – ट्वान्टी सिरिज नेपालले आफ्नो पक्षमा लेखाउन सफल भएको छ ।
दुई खेलको सिरिजमा नेपालले पहिलो खेलमा मलेसियालाई शनिवार ७ विकेटले पराजित गरेको थियो भने आज आईतवार भएको दोस्रो अर्थात अन्तिम खेलमा ६ रनले पराजित गर्दै सिरिज नेपालले आफ्नो कब्जामा राख्न सफल भएको हो ।
खेलमा नेपालले प्रस्तुत गरेको १ सय ७४ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली मलेसियाले निर्धारित २० ओभर पुरै खेलेपनि ७ विकेटको क्षतिमा १ सय ६७ रनमा सिमित हुँन पुगेपछी खेल नेपालले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो ।
आजको खेलमा मलेसियाले ठूलो लक्ष्य पछ्याएको भएपनी सुरुवात शानदार गरेको थियो । ओपनर ब्याट्सम्यान विरदिप सिँह र सैयद अजिजले टिमलाई राम्रो सुरुवात दिने क्रममा ७५ रनको ओपनिङ साझेदारी गरेका थिए ।
९.४ ओभरमा पहिलो विकेटको रुपमा सिंहलाई मलेसियाले २३ रनमा गुमाएको थियो । उनलाई अभिनाश बोहराले पभेलियनको बाटो देखाई दिएका थिए । यसपछि लगत्तै अर्का ओपनर सैयद पनि आउट हुन पुगे ।
सोमपाल कामीको बलमा क्याच आउट भएका उनले ३७ बलको सामना गर्दै ७ चौका र १ छ्क्काको मद्दतमा अर्धशतकीय ५० रनको पारी खेलेका थिए ।
यसपछि भने नेपाल खेलमा फर्किएको थियो । तर मलेसियाले खेललाई अन्तिम ओभर सम्म लगेको थियो । मलेसियालाई अन्तिम ओभरमा जितका लागि १४ रनको आबस्यक रहेको थियो । तर करन केसिले अन्तिम ओभरमा राम्रो बलिङ गरेपछि रोमाञ्चक बनेको खेलमा मलेसिया निराश हुन पुग्यो ।
मलेसियाका लागि ओपनर बाहेक कप्तान अहमद फैइजले १७ रन , शफिक शारिफले १० रन र अमिनुदिनले २४ रनको योगदान गरेका थिए ।
बलिङतर्फ नेपालका सोमपाल कामी र सन्दिप लामिछानेले समान २/२ विकेट हात पारे ।भने अभिनाश बोहरा , पारस खड्का र करन केसिले पनि १/१ विकेट हात पारे ।
त्यसअघि क्वालालम्पुरस्थित किनरारा ओभल क्रीकेट मैदानमा जारी खेलमा नेपालले ट्स जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्दै निर्धारित २० ओभर पुरै खेल्दै ६ विकेटको नोक्सानीमा १ सय ७३ रन बनाएको थियो ।
नेपालका लागि बिनोद भन्डारीले आक्रमक ब्याटिङ गर्दै अबिजित रह्दै सर्बाधिक धेरै रन बनाउँने क्रममा अर्धशतकिय पारी खेले । २५ बलको सामना गरेका उनले ३ चौका र ४ छ्क्काको मद्धतमा ५१ रनको योगदान गरे ।
सुरुवात भने नेपालले मध्यम गरेको यसअघि पहिलो खेलमा ओपनर प्रदिप एरि र पारस खडकाले गरेका थिए भने आज प्रदिपको ठाउँमा पवन सरार्फलाई ओपनरको जिम्मा दिईएको थियो ।
जसअनुसार नेपालले पहिलो विकेट्का लागि ओपनिङ ३४ रनको साझेदारी पाएको थियो । ४.५ ओभरमा पहिलो विकेटका रुपमा पवनलाई टिमले ब्यक्तिगत १० रनमा गुमाएको थियो ।
यसपछि उप- कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई दोस्रो विकेटका लागि मात्र ७ रनमा गुमाउँदा पारस खडकालाई पनि टिमले २३ रनमा गुमायो । यसअघि पहिलो खेलमा उनले अबिजित रह्दै ८६ रनको पारी खेलेका थिए तर आज उनी सफल हुँन सकेनन ।
यसपछि रोहित कुमार पौडेल र शरद भेषावकर बिच ४६ रनको साझेदारी हुँन पुगेको थियो । जसले नेपालको ईनिङलाई बढाउन ठूलो भुमिका निर्बाह गर्यो ।
चौथो विकेटका लागि रोहित १९ रन बनाएर आउट हुँन पुगे । उनी सैयद अजिजको बलमा फित्री शामको हातबाट क्याच आउट हुँन पुगेका थिए ।
भने मध्यक्रममा ब्याट्सम्यान शरद भेषावकरले सर्बाधिक धेरै रन बनाए । २८ बलको सामना गरेका उनले ४ चौका र २ छ्क्काको मद्धतमा ४० रनको योगदान गरे ।
यस्तै करन केसिले १६ तथा सोमपाल कामी १ रनमा अबिजित रहे ।
बलिङतर्फ मलेसियाका लागि फित्री शामले सर्बाधिक ३ तथा सैयद अजिज र शारभिनले समान १/१ विकेट हात पारे ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज पछि अब नेपाल र मलेसिया जुलाई २० देखी २८ तारिखसम्म बिश्वकप छ्नोट प्रतियोगिता खेल्न सिगाँपुरतर्फ प्रस्थान गर्नेछ्न ।
टि – ट्वान्टी विश्वकपको छ्नोट प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा रहेको एसीया छनोट प्रतियोगितामा आयोजक सिगाँपुर सहित नेपाल, कतार, मलेसिया र कुबेतको सहभागिता रहने छ ।
नेपालले २३ जुलाईमा कतार बिरुद्द खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ । भने जुलाई २४ मा मलेसियाको सामना गर्नेछ । यस्तै तेस्रो खेलमा जुलाई २७ मा कुबेतको सामना गर्नेछ भने अन्तिममा आयोजक सिगापुर सँग जुलाई २८ मा नेपालले खेल्नेछ ।
Previous Postविश्वकप फाइनल आज : ईङल्याण्ड र न्युजिल्याण्डलाई ईतिहास रच्ने ठुलो अबसर
Next Postहेर्नुहोस फोटोमा ! मलेसियाविरुद्धको टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलामा नेपालको क्लिन स्विप